प्रचण्ड-नेपाल गठजोडले ओलीको पद धरापमा ! - Sankalpa Khabar
प्रचण्ड-नेपाल गठजोडले ओलीको पद धरापमा !
१३ कार्तिक १८:४३
काठमाडौं । आगामी मंसिर भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्ने अभियानमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुटेका छन् । यो अभियानका लागि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरुका अलवा प्रतिपक्षी दलका नेताहरु सँग पनि कुरा अघि बढाएका छन् ।
हुन त प्रधानमन्त्री ओलीको दुई वर्षे कार्यकाल पुग्दा नपुग्दै गत मंसिरमै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार परिवर्तनको गृहकार्य थालनी गरेका थिए । पार्टी एकीकरणका बेला भएको संझौतामा सुरुको दुई वर्ष ओली र त्यस पछिको तीन वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने लिखितम गरिएको थियो । त्यो लिखितमलाई कार्यन्वयन गराउन प्रचण्डले त्यतिबेला गरेको प्रयास सफल हुन सकेन । ओली नै पुरा अवधी प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्डलाई शक्ति बाँडफाँड गर्ने सहमति भयो । तर, त्यो सहमति ओलीले कार्यान्वयन नगरेपछि यतिबेला प्रचण्ड कुनै हालतमा पनि सरकार परिवर्तन गर्ने अभियानमा जुटेका हुन् ।
आफू प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सर्दा ओली विरुद्ध बहुमत पुर्याउन नसकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अघि सारेका छन् । नेपाललाई भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्दा ओली विरुद्ध स्वतः बहुमत पुग्ने अंकगणित नेकपाको संसदीय दलमा छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तत्कालिन एमालेको ठूलो पंक्ति तयार नभएकै कारण ओलीको पद संकटमा परेको थिएन, तर प्रचण्डले भाबी प्रधानमन्त्रीका रुपमा माधव नेपाललाई अघि सारेपछि ओली संसदीय दलमा कमजोर भएका छन् ।
समाचार स्रोतका अनुसार गत भदौमा भएको सहमति विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउने प्रयासमा जुट्दा प्रचण्ड आलीसँग मिल्नै नसक्ने गरी विच्केका हुन् । उनले यही कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै अब साथ दिन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जानेबुझेको गर्न चुनौती दिएका थिए ।
यो भेट लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले माधवकुमार नेपाललाई भेटेर प्रचण्डलाई एक्ल्याउने प्रस्ताव अघि सारे । साथै अन्तिम एक वर्ष प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वसन पनि दिए । यो सुँइको पाए पछि प्रचण्डले माधव नेपाललाई भेटेर मंसिर भित्रै प्रधानमन्त्री बनाई दिने बचन दिएका छन् । आफू विरुद्ध शक्तिशाली मोर्चा बनेको सुँइको पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक १५ देखि बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि दुई वटा विधि छन् । एउटा विधि पार्टीको आन्तिरिक प्रक्रिया हो । अर्को विधि संसदीय प्रक्रिया हो । संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त पार्टी भएकोले नेकपाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरी ओलीलाई विस्थापित गर्न सक्छ । तर पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता दुवै पद ओलीसँग छ । उनले आँफू संकटमा पर्ने गरी संसदीयदलको नेता परिवर्तन प्रक्रिया अघि बढाउन दिने संभावना छैन ।
यो प्रक्रियामा जाँदा ढिलाई हुने अवस्था छ । अर्को प्रक्रिया अर्थात प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड छन् । संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमत ल्याएर हटाउन सकिने प्रावधान छ । ओली विरुद्ध प्रचण्ड र माधव नेपालकै गठजोडले प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन ।
यसका लागि नेपाली कांग्रेस र मधेसीदल दुवैले साथ दिनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेस र मधेसीदल दुवै तयार देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले यही कात्तिक २१ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र राजीनामा नदिए आन्दोलन थाल्ने निर्णय गर्दैछ । नेपाली कांग्रेस र मधेशी दलले माधव नेपाललाई भाबी प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री विरुद्ध आविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी प्रचण्डले कुरा अघि बढाएका छन् ।
माधव नेपालले ओली विस्थापित गर्ने एकिन हुना साथ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ । नेकपाका १ सय ७५ सिटमध्ये ५० सिट मात्रै प्रचण्ड र माधव नेपालले फुत्काए भने पनि ओली सरकार ढल्छ,तर उनीहरु कम्तिमा १ सय सीट फुत्काउन सक्ने अवस्थामा छन् । प्रचण्डले तत्कालिन माओवादीका ५३ सीटमध्ये ३५ सीट मात्रै आँफुसँग इन्ट्याक्ट राखेका छन् , तर माधव नेपालले भने तत्कालिन एमालेमा आफ्नो पक्षका जति सांसद थिए त्यसमा पनि २०/२५ जना थपेका छन् ।
विज्ञापन बोर्डको सदस्यमा राजधानी दैनिक र एबीसी टेलिभिजनका मालिक…
१५ मंसिर १४:४९
१९४८ संक्रमित थपिए, आज २८ जनाको मृत्यु
१० मंसिर १६:३८
१३ मंसिर १४:०७
विश्वमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने १४ लाख नाघे, दैनिक संक्रमित…
९ मंसिर ०८:५२
उद्योग वाणिज्य महासंघको मत परिणाम धमाधम आउँदै, क–कसले जिते…
१३ मंसिर २२:३०